I-iPhone Team GPS repo ngoku iyafumaneka | IPhone iindaba
I-iPhone Team GPS repo ngoku iyafumaneka
I-repo yeQela le-iPhone yeQela ngoku iyafumaneka, iqela eliza ilungiselele indawo yokugcina izinto eCydia onokufaka kuyo (kunye nokuhlaziya) iiradar ngendlela elula, ekhawulezayo kunye nentofontofo.
Iyahambelana ne- ibha kwaye kunjalo ngeelwimi ezi-4: iSpanish, isiCatalan, isiNgesi nesiFrentshi.
Impendulo imi ngolu hlobo lulandelayo:
Ulwazi oluthe kratya kwi www.gpsiphoneteam.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-iPhone Team GPS repo ngoku iyafumaneka
Ndiyabulela kakhulu, umsebenzi ogqwesileyo
Ngaba iyahambelana ne-navigon ????
Hayi, okwangoku kuphela ngeTomtom, kodwa yonke into iya kusebenza kwizikhangeli ezizayo.
Kulungile, Enkosi kakhulu
Enkosi kuni bafo ngokukholelwa kuthi.
Enkosi kwiqela lam ebelikholelwa kwimbono ephambeneyo yodongwe ethe namhlanje yenzeka.
Ndingakucela ukuba uthumele i-imeyile ngoluvo lwakho ngeprojekthi oyithandayo kunye nabanye, sifuna ukwazi ukuba kufanelekile na ukuba kungumsebenzi omninzi kangaka, idilesi ye-imeyile IS INFO@GPSIPHONETEAM.COM
Isicelo silungile, ndikuthumele iimbono ezimbalwa ukuze ubone ukuba ucinga ntoni.
Phendula kwi kjbturok
ISITYHILELO enkosi kakhulu kuwe nakwiqela lakho. Umsebenzi omhle kakhulu.
Kodwa i-Tomtom sele ikulumkisile ngee-radars ezisisigxina kunye nee-radars ezihambayo ... okanye ke ibeka ubumbeko lweTomtom ...
Zeziphi izibonelelo zale repo?
Uvavanyo lwakho ukubona ukuba ngaba luyalumkisa na ngee-radars ezihambayo kunye nolawulo lwezithuthi kunye namabala amnyama njl. Xa sele uyizamile uyakuqaphela umkhombandlela.
Ukongeza, ii-repo radars "zithetha" kuwo onke amanqanaba, amagosa e-tomtom kuphela "abetha impempe" kwii-radars ezimiselweyo.
kulungile ngaphandle kokuhlaziya xa behlaziya kwezinye ii -apps kwaye ingeyiyo eyurophu okanye iUnited States kuphela.
Ndinombuzo, ndilandela iphepha lakho eMelika kwaye bendifuna ukwazi ukuba isicelo se-radar siyasebenza e-United States okanye eYurophu kuphela, enkosi ngoncedo lwakho kwangaphambili
iindaba ezimnandi .. thankssssssssssssssssssss
Igalelo elikhulu, kodwa zeziphi iifayile ezikhoyo zokufaka kwi-repo yonke?
Ndiyabonga kakhulu ngegalelo.
Ndisandul 'ukuyifaka kwaye isebenza kakuhle.
Ukubulisa kubo bonke
Andiqondi ukuba kutheni le nto isebenza. umntu othile uyandicacisela, enkosi.
Kuthathe okuninzi kodwa ekugqibeleni kufezekisiwe ...
Nceda uphawule nge-imeyile ku ulwazi@gpsiphoneteam.com ukuba unayo nayiphi na ingxaki ngeephakeji.
Phendula u GUILTY
Umsebenzi ogqibeleleyo, ndiye ndajonga ii-radars ezaziwayo zeselfowuni kwaye zizonke. Enkosi.
Enkosi nge-repo, kodwa ndihlala ndizibuza ukuba bangaphi abantu abenzayo.
Ii-radar ezingatshintshiyo sele zifakiwe kunye neTomTom kunye neefowuni eziphathwayo ... ziya kuba ziifowuni eziphathwayo, kwaye oko kunokuba kukuxwayise kwaye kukunike imfazwe kuyo yonke loo ndlela, kuba zihlala zitshintsha iindawo kunye nolawulo lwezithuthi nokuba zikhona akukho kukulila ??
Ubuncinci iyenzeka kum ngezicelo ezinje ngeAvisaMe.
Amachaphaza amnyama ayakuxwayisa? Ewe, kunokuba kulungile, andazi.
Andikwazi ukungqina, ndivela kwi-navigon.
Ndiza kuba ngamehlo am evulekile ndibukele ukuze ndibone ukuba iyahambelana na ne-navigon.
Umsebenzi olungileyo ngokukhawuleza xa ndizama, ndithumela uluvo. Enkosi
umntu andixelele ukuba ingantoni le.
Yintoni eza kubanjwa ngutom kwiscreen kwakhona. Ngaphandle kwesiqhelo ngaba enye into iya kubonakala?
IiRadars zinokukhutshelwa kwiTomTom Argentina v 1.7
Ewe, kwimeko yam, nangona ndihlala ndisebenzisa i-tomtom, kwaye ndinokhetho lwe-radar olwenziweyo ... akukho ndlela yomntu yokubabona, andibaboni, ayindilumkisi ...
Ke kuzakufuneka ndijonge ukuba benze ntoni aba bantu… kuhle!… Enkosi.
jur jur enkosi kakhulu sele ndiyifakile. Kule mpelaveki ndizakuzama ukungqina.
Ngaba umba wokubhaqa ii-radars ezihambahambayo ukhuselekile? Ukusuka kwinto endiyifundileyo, ukuba unomtshini weselfowuni nabo bayakufumanisa ...
Umsebenzi olungileyo gpsiphonetea !!! iluncedo kakhulu ekufezekisweni.
umbuzo, yintoni ekufuneka ifakwe ukuze i-RAM ivele kwiscreen?
imibuliso kunye neZorionak
Umsebenzi ongenakulinganiswa! Enye yezona ndawo zisebenza kakuhle endizibonileyo. Enkosi ngegalelo !!!
Emva kokuyifaka, zonke iintandokazi ziye zanyamalala !!…. UNCEDO !!
Isifundo: ungayicoca njani imbali ye-Mobile Safari
Ukukhuphela iifoto ze-FB, isicelo esitsha sokukhuphela iifoto kwi-Facebook